Kyrgyzstan: Tafiditra Anelanelan'ireo Nasionalista, Manasazy Mpanao Gazety Ny Fitsarana
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Aogositra 2012
Mikasika ny raharaha iray niteraka adihevitra be, nosazian'ny fitsarana iray ao Kyrgyzstan tamin'ny fandoavana honitra i Vladimir Farafonov, mpanao gazety teratany Rosiana, nohon'ny famoahana lahatsoratra izay mandrisika ny fisian'ny fifankahalan'ny vahoaka iray firenena. Nizara roa ny mponina amin'ny aterineto teo amin'ny fanehoan-kevitra mikasika ny didim-pitsarana. Raha maro ireo izay mihevitra fa tokony nomena sazy somary henjankenjana ilay mpanao gazety, ny hafa kosa dia manambara fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny fitsarana io didim-pitsarana io.
Anatin'ity sehatry ny fanentanana "Aza matahotra ny Aterneto" [es] ity dia hifantoka amin'ny fomba hahatongavan'ireo lalàna sasany momba ny copyright sy ireo fomba fanao hanakivy ny fampiasàna ny Aterineto ho an'ny fanehoan-kevitra. Ireto misy valinteny dimy fampidirana ho an'ny olana iray nampiray ireo mafàna fo eran-tany hiady amin'ny SOPA, ACTA, TPP, sns.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Aogositra 2012
Niseho tamin'ny fahitalavi-panjakana ny Jeneraly Mohamed Ould Abdel Aziz Filoha Maoritaniana, ny 6 Aogositra teo. Nidaroka mpanao gazety ny mpitandro ny filaminana raha nandrakotra fisamborana sy fampijaliana nihatra tamin'ny vahiny nasaina iray izy, vahiny izay niantso ny Jeneraly mba hiala. Nanaraka sy nanadihady io tranga io ara-potoana ireo Maoritaniana mpampiasa Twitter .
Global Voices Podcast: Zavatra Maro Avy Amin'ny #GV2012
Kenyà 18 Aogositra 2012
Anatin'ity andiany ity ianao dia haheno zavatra maro avy amin'ny Fivoriamben'ny Global Voices izay notanterahina tany Nairobi, Kenya, tamin'ny Jolay, izay ahitàna ny sasany amin'ireo mpandray anjara avy aminay sy ireo akademisiana voafantina eran-tany nasaina ihany koa hizara ny fahalalany sy hanovo fahalalana avy amin'ilay fianakaviambe.
Azia Atsinanana 18 Aogositra 2012
Ho valin'ny fanadinoana ny fanoherana nokarakarain'ny mpampiasa aterineto, dia nanpanantena ny hijery ilay tovana mampifanolana amin'ny lalàna izay lazain'ny tsikera fa mametra ny fahalalahan'ny aterineto ao amin'ny firenena ny governemanta Maleziana.